Football Khabar » १० खेलाडीमा सीमित बेटिसमाथि बार्सिलोनाको शानदार जित : मेस्सीको २ गोल !
१० खेलाडीमा सीमित बेटिसमाथि बार्सिलोनाको शानदार जित : मेस्सीको २ गोल !
पेनाल्टी गोलको लामो यात्रामा पूर्णविराम लगाउँदै लिओनल मेस्सीले २ गोल गरेपछि स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाले फराकिलो जित निकालेको छ । शनिबार राति भएको खेलमा बार्सिलोनाले आफ्नो घरेलु मैदानमा रियल बेटिसमाथि ५–२ को जित निकाल्यो । क्याम्प नोउ रंगशालामा पाहुना टोली बेटिस खेलको ६०औं मिनेटमा १० खेलाडीमा सीमित भएको थियो ।
रोमाञ्चक खेलमा बार्सिलोनाका फ्रेन्च फरवार्ड एन्टोनी ग्रीजम्यानले एक पेनाल्टी मिस गरे भने दोस्रो हाफको सुरुआतमै मैदान छिरेका कप्तान मेस्सीले १ पेनाल्टीसहित २ गोल गोल गरे । मेस्सीले पेनाल्टी गोलको यात्रालाई आज पनि निरन्तरता दिए । उनले बेटिसविरुद्ध पहिलो गोल गरेर लगातार पाँचौं गोल पनि पेनाल्टीबाटै गरेका थिए । तर, उनको छैटौं गोल भने ओपन एरियाबाट आयो ।
प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा बार्सिलोनाका लागि खेल सुरु भएको २२औं मिनेटमा फ्रेन्च विंगर उसामान डेम्बेलेले खतरनाक सटमा उत्कृष्ट गोल गरेका थिए । बक्स बाहिरबाट बल डि एरियामा प्रवेश गराएर उनले बेटिसका डिफेन्डरलाई छलाउँदै हानेको बुलेट सटले सोझै जाली चुमेको थियो । उनको प्रहार बेटिसका अनुभवी गोलकिपर क्लाउडिओ ब्राभोले बचाउने कुनै मौका नै पाएनन् ।
त्यसपछि पहिलो हाफको थप समयमा बेटिसका लागि एन्टोनियो सनाब्रियाले उत्कृष्ट गोल गर्दै खेल १–१ बनाए । उनको कडा प्रहार बार्सिलोनाका गोलकिपले रोक्ने मौका नै पाएनन् । सनाब्रिया बार्सिलोनाकै पूर्वखेलाडी हुन् । उनले पूर्वक्बलविरुद्ध आफ्नो गोलको खुसीयाली मनाएनन् ।
यता, पहिलो हाफ बार्सिलोनाका एन्टोनी ग्रजिम्यानका लागि भने निकै खराब रह्यो । उनले एक पेनाल्टी मिस गरे । ३३औं मिनेटमा उनले हानेको पेनाल्टी प्रहार बेटिसका गोलकिपर ब्राभोले उत्कृष्ट बचाउ गरेका थिए । त्यसअघि ग्रीजम्यानले तीन सुनौला अवसर खेर फालेका थिए । उनले तीन राम्रा अवसरमा तीनपटक नै पोस्ट बाहिर हानेका थिए । बेटिसका खेलाडीले अन्सु फातीलाई बक्समा लडाएपछि बार्सिलोनाले पेनाल्टी पाएको थियो ।
पहिलो हाफ १–१ मा सकिए पनि दोस्रो हाफमा बार्सिलोना पूर्णतः हाबी भयो । खेलको ४९औं मिनेटमा बार्सिलोनाका लागि पहिलो हाफमा पेनाल्टी मिस गरेका ग्रीजम्यानले खाली पोस्टमा गोल गरे । जोर्डी अल्बाको क्रस पासमा उनले गोलकिपरबिनाको खाली पोस्टमा गोल गरेका थिए । ग्रीजम्यानलाई खोली पोस्टमा गोल गर्ने अवसर सिर्जना गर्न कप्तान मेस्सीले बक्समा चलाखीपूर्वक भूमिका खेलेका थिए ।
त्यसपछि ६०औं मिनेटमा बेटिसका खेलाडी आइसा मान्डीले रातो कार्ड पाए । बक्सका बार्सिलोनाका खेलाडीले लामो दूरीबाट हानेको प्रहार रोक्नेक्रममा ह्यान्ड बल भएपछि रेफ्रीले उनलाई भिएआरमार्फत् सोझै रातो कार्ड दिएर बार्सिलोनालाई पेनाल्टीको मौका दिएका थिए, जसमा कप्तान मेस्सीले सहजै गोल गर्दै खेल ३–१ बनाए । सो गोल मेस्सीको लगातारको पाँचौं पेनाल्टी गोल थियो ।
त्यसपछि खेलको ७३औं मिनेटमा बेटिसका खेलाडी लोरेन्जो जेसस मोरोन गार्सियाले क्रस पासमा सुन्दर गोल गरेपछि खेल ३–२ मा छोट्याएर खेलमा टिमलाई जीवितै राखेका थिए । तर, १० खेलाडीमा झरेको बेटिसले अन्तिम समयमा बार्सिलोनाको दबाब थेग्न सकेन । र, थप २ गोल खायो ।
बार्सिलोनाका लागि खेलको ८२औं मिनेटमा मेस्सीले नै सर्जी रोवेर्टोको पासमा सुन्दर फिनिसङमा गोल गरेपछि बार्सिलोना जिततर्फ अघि बढेको थियो । फेरि ९०औं मिनेटमा बार्सिलोनाका लागि युवा खेलाडी पेड्रीले गोल गरेपछि बार्सिलोनाले खेल ५–२ ले जित्यो । ला लिगामा उनको यो पेड्रीको पहिलो गोल थियो । उनको गोलमा पनि रोवेर्टोले नै असिस्ट गरेका थिए ।
अब यो जितपछि बार्सिलोनाले अंक तालिकामा सुधार गरेको छ । बेटिसलाई हराएसँगै बार्सिलोना ७ खेलपछि कूल ११ अंक जोडेर आठौं स्थानमा चढेको छ । उसले ४ स्थान सुधार गरेको हो । रियल अझै पनि समान खेल खेलेको रियल मड्रिडभन्दा ५ अंकले पछि छ । यता, पराजित बेटिस ९ खेलपछि १२ अंकसहित सातौं स्थानमा छ ।
प्रकाशित मिति २२ कार्तिक २०७७, शनिबार २२:५४